Posted by pandora at 10:18 PM
မပန်ရဲ့ ခေါင်းကတော့ ရွှေချထားရမယ်ထင်ပါ့
ခေါင်းကိုက်တာတောင် အမိုက်စားဖွဲ့ နွဲ့ နိုင်တယ်
“သင်္ကြန်မှာ ပြောင်းတဲ့ ဗြဟ္မာကြီး ဦးခေါင်းထင်တယ်”
ခေါင်းကိုက်တုန်းရေးထားတာမို့ ပဲ ကဗျာကအရမ်းကောင်းတယ်ဗျ............။
အဲ့ဒီခေါင်းကြိးတွေကိုမုန်းတယ် စိတ်ရှိတိုင်းသာဆို အုန်းသီးခွဲသလိုခွဲပစ်ချင်တယ်................
ခေါင်းဖြုတ်ပြီးတော့ နှလုံးသားငုံးတိတိနဲ့တော့ မနေလိုက်ပါနဲ့မမရယ်.. နှလုံးသားနဲ့ချည်းပဲ အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ရင် မှားကုန်မှာပေါ့. နော့လေ.. ခေါင်းကိုက်တာ ပျောက်သွားပြီလား။ :)
အဲဒီခေါင်းကြောင့်ပဲ တချို့တွေ အမေ့အိမ်နဲ့ခွဲခဲ့ရတယ်...
အဲဒီခေါင်းကြောင့်ပဲ တချို့တွေ ရည်းစားဦးနဲ့ ကွဲခဲ့ရတယ်...
အဲဒီခေါင်းကြောင့်ပဲ တချို့တွေ လွတ်လပ်မှူနဲ့ လွဲခဲ့ရတယ်...
အဲဒီခေါင်းကြောင့်ပဲ တချို့တွေ .....
အဲဒီခေါင်းကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းခဲ့ရတယ်...
အဲဒီခေါင်းကြောင့်ပဲ သဘာဝတရားတွေ ပါးလျခဲ့ရတယ်...
တစ်ခါတစ်ခါများဆို မထူချင်လောက်အောင် ကိုက်တဲ့ခေါင်း...
PANADOL EXTRA လဲ မကူနိုင်လောက်အောင် ကိုက်တဲ့ခေါင်း...
အချိန်ပေး အေးအေးဆေးဆေး အနားယူဖို့လိုကို လိုအပ်နေတဲ့ခေါင်း...။
ခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့ကိုဒဿဂီရိ ခေါင်းများကိုက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်ဆေးခန်းကိုသွားလို့ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြခဲ့ဖူးပါသလဲ... PANADOL တွေ PARACETAMOL တွေ ဘယ်နှစ်လုံးများ သောက်ခဲ့ဖူးပါသလဲ လို့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေးမိ။
ဒီလိုတွေးရင်း အဖြေမရ လုံးလည် ချာလည်လိုက်...
ဒါနဲ့ ဘဲ ခေါင်းကပို ပိုကိုက်...။
ဖြတ်သာ ထားလိုက်တော့ ပန်ပန်ရေ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ပန်ဒိုရာကတော့ ပန်ဒိုရာပါပဲ..။
မျက်လုံးနှစ်လုံးကို နှလုံးသားမှာ တပ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလား မပန်၊ ဒါပေမဲ့ မကြင်ရ၊ မကြားရ အဲဒါမျိုးလေးအတွက် နှလုံးသားငုံးတိတိပဲ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ညနေဘက် စီးတီးဟောလ် ရောက်ရင်
ခေါင်း ပြီးရင် ပန်း ဆက်ရေးဗျာ :P
လင်း > လိုချင်ရင် ဖြုတ်ယူသွား အလကားပေးထားတယ်လေ။
ကိုယော. > သောက်ဘူး။ ပြဘူး။ ယူဘူး။ အဲသလို မာတဲ့ခေါင်း။
မောင်မျိုး > စိတ်ထိန်းပါ စိတ်ထိန်းပါ
ကောင်မလေး > ခေါင်းကိုက် ပျောက်ပါပြီကွယ်
မတန်ခူးရေ > ဘလော့ရေးဖြစ်တာတော့ အဲဒီခေါင်းကြောင့်ပဲလား.. စဉ်းစားနေတုန်း..။
သက်ဝေ > ဒဿဂီရိ မဖြစ်တာ ကံကောင်းနေသေးပေါ့နော်။
ပင့်ဂိုးလ် > လာဖြတ်လှည့်
ဆရာမမေငြိမ်း > အဟဲဟဲ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေကိုတော့ မီပါဝူး
သိုးမလေး > တခါတလေပေါ့နော်
ကိုပေါ > အဲဒီခေါင်းသုပ်ကို လိုက်စားချင်လိုက်တာ။
ကိုစိုးထက် > ဆေးကျောင်းထွက်တွေများ လောင်းကစားပဲ တွေးနေတာကိုး.။ ဟိဟိ
မပန်ရေ .. ဂျစ်အတွက်တော့ .. ခေါင်းဆိုတာ အလွန်အကျွံ မဖြစ်ဖို့ အဓိကပေါ့ ... အသုံးချလွန်းရင် တွေဝေသွားတတ်ပြီး .. မသုံးပြန်ရင်လည်း အမှားများတတ်တယ် ..